Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare: Waxaan u baahannahay in aan wada jir uga shaqeyno dhameystirka dastuurka – Kalfadhi
April 19, 2018 Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed iyo hey’addaha ku shaqadda leh arrimaha dastuurka looga baaahan yahay in ay si wada jir ah uga shaqeeyan dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka ah.
Mudane Cabdi xaashi oo ka hadlayay furitaanka shir looga hadlayo dhameystirka dastuurka oo shalay ka furmay Muqdisho ayaa dhinaca kale tilmaamay inay tahay in ummadda Soomaaliyeed ay iyada ka tashato aayaheedda.
Dastuurkan qabyada ah ayaa la qorray 1-dii bishii Agoosto,2012-kii,waxaana weli jira maamul goboleedyo ku dooddaya in wax ka bedel lagu sameeyo qoddobada qaar .
Shirkan looga hadlayo dastuurka oo ay ka qeyb galayan baarlamaannada dowladdaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo wasaarada dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta gelinka dambe lagu soo soo xiraya caasimada Muqdisho.
Musharrixiinta u taagan xilka guddoomiyenimada golaha shacabka